Siyakwamukela ku-Inqubomgomo Yobumfihlo ye-LifeBogger Page. Ku-lifebogger.com, ubumfihlo bezivakashi zethu kubaluleke kakhulu kithi. Le dokhumenti yomgomo wobumfihlo ichaza uhlobo lolwazi lomuntu siqu olwamukelwa futhi luqoqwe ngathi nokuthi lisetshenziswe kanjani.
Njengamanye amawebhusayithi amaningi, sisebenzisa amafayela welogi. Ulwazi ngaphakathi kwamafayela we-log kufaka phakathi amakheli we-intanethi (IP), uhlobo lwesiphequluli, umhlinzeki wezinsizakalo ze-intanethi (ISP), isitembu samanje / isikhathi, amakhasi okudlulisa / okuphumayo, nenombolo yokuchofoza ukuhlaziya izitayela, ukuphatha isayithi, ukulandelela ukuhamba komsebenzisi ezungeze isayithi, futhi uqoqe imininingwane yabantu. Amakheli we-IP, nolunye ulwazi olunjalo aluxhunyiwe kunoma yiluphi ulwazi olubonakala ngokusobala.
I-LifeBogger ayisebenzisi amakhukhi.
. :: I-Google, njengomthengisi wesithathu, isebenzisa amakhukhi ukuhambisa izikhangiso ku-LifeBogger.com.
Ukusetshenziswa kwe-Google kwekhukhi ye-DART kwenza kube lula ukukhangisa kubasebenzisi ngokusekelwe kokuvakashela kwabo ku-LifeBogger.com nakwezinye izingosi kwi-intanethi.
. :: Abasebenzisi ukuphuma ukusetshenziswa ikhukhi DART ngokuvakashela Ingqubomgomo yobumfihlo inethiwekhi ye-Google isikhangiso kanye nokuqukethwe at the URL elandelayo - http://www.google.com/privacy_ads.html
Abanye abalingani bethu bokukhangisa bangasebenzisa amakhukhi nama-beacons ewebhu kusayithi lethu. Umlingani wethu wokukhangisa uhlanganisa ... .Google Adsense
Kuyafaneleka ukuphawula ukuthi i-LifeBogger.com ayinakho ukufinyelela noma ukulawula kulawa makhukhi asetshenziselwa abakhangisi benkampani yangaphandle.
Kufanele uxhumane nezinqubomgomo zobumfihlo eziqondene nalezi ziseva zezikhangiso zenkampani yangaphandle ukuze uthole ulwazi oluningiliziwe ngemikhuba yabo kanye nemiyalelo mayelana nendlela yokuphuma emikhuba ethile. Inqubomgomo yobumfihlo ye-LifeBogger ayisebenzisi, futhi asikwazi ukulawula imisebenzi yabanye abakhangisi noma amawebhusayithi.
Siphinde senze lokhu okulandelayo:
 Ukubikwa kwabantu kanye nezintshisekelo
Thina kanye nabathengisi benkampani yangaphandle, njengama-cookies wokuqala we-Google (njengama-cookies we-Google Analytics) kanye namakhukhi wesithathu (njenge-cookie ye-DoubleClick) noma amanye ama-identifier ahlangene ndawonye ukuqoqa idatha ngokuphathelene nokusebenzisana komsebenzisi ukukhangiswa kokukhangisa, neminye imisebenzi yesikhangiso sokukhangisa njengoba ihlobene newebhusayithi yethu.
Abasebenzisi bangabeka izintandokazi zendlela i-Google ikukhangisa ngayo usebenzisa ikhasi le-Google Ad Settings. Ngaphandle kwalokho, ungakhetha ukuphuma ngokuvakashela uhlelo lokukhangisa kwenethiwekhi ukhetha ikhasi noma usebenzise unomphela isiphequluli se-Google Analytics Opt Out.
Sicela ukhululeke ukuxhumana nathi ku-lifebogger@gmail.com noma i-info@lifebogger.com uma unemibuzo ephathelene neNqubomgomo Yobumfihlo.